DAAWO SAWIRO:- Niman ku qaraaban jiray magaca NISA oo lagu qabtay Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DAAWO SAWIRO:- Niman ku qaraaban jiray magaca NISA oo lagu qabtay Muqdisho
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya lagu soo bandhigay rag lagu soo qabtay fal burcadnimo ah, oo ay ka wadeen xaafado ka tirsan degmooyinka Yaaqshiid iyo Heliwaa.
Ciidamada nabad-sugidda qaranka Soomaaliyeed ee loo yaqaano NISA ayaa ragaan oo tiradooda ahaa 2 qof kusoo bandhigay degmooyinkaasi, iyadoona uu jiray mid sedaxaad balse uu baxsaday intii uu howlgalku socday.
Labadii kale oo haatan gacanta ugu jira ciidanka nabad-sugidda qaranka Soomaaliyeeed NISA ayaa waxaa loo taxaabay xabsiga, si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo.
G/sare Maxamed Xasan Faarax (Faranfar) oo ah taliye ku xigeenka ciidanka nabad-sugidda gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay inay raggani ku qaraaban jireen magaca hay’adda nabad-sugidda islamarkaana wixii ay dadka haystaan ka qaadan jiray.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka dhibanayaasha ahaa ee ay dhaceen burcadaan abaabulan ayaa sheegay inay saq-dhexe u imaan jireen iyagoo isugu sheegi jiray inay yihiin nabad sugidda qaranka, iyagoo kadib ka qaata mobeelada, kombiyuutarada gacanta, lacagaha, baasabooro, ID kaaro, shahaadooyin iyo wiixii kale ee ay gacantooda qabato.